Ndeapi backlinks aunoda kuti uvandudze nzvimbo yako yekuonekwa?
Kubva pakugadzirisa nzvimbo yekuona, kubudiswa kwehutano hunoita kuti uite hyperlink kubva kune dzimwe nzvimbo dzewebhu iwe pachako kuburikidza nehutano hwakasiyana hwekugadzira nzira dzakadai seblog posting, comment backlinks, press releases, etc.Zvose izvi zvinoshanda kupa kupa kwako kutendeseka uye kusimudzira nzvimbo yako mukurumbira mukati mebhizimusi rako. Tsvaga injini nezvekubatana kwemashoko ayo anoratidza saiti yako sevhoti yemavhidhiyo uye mari yakawanda yevhoti iwe, iyo yakakwirira nzvimbo yako ichava pane SERP.
Zvisinei, muchokwadi haisi mavhoti ose akaenzana. Pane maitiro akawanda e spammy anoshandiswa kubiridzira kutsvaga injini uye kuwedzerwa hurefu nehutsika hwehutano hwehutano. Zvisinei, nguva, apo iwe unogona kungozvivakira huzhinji hwehutano hwakasvibiswa huri pakati pedzimba yako, hwaenda. Mazuva ano, Google nemamwe makuru ekutsvakurudza injini ari kurwisana nemabasa ekugadzira mazano ekubatana akadai sekubatanidza kuirima, zvinyorwa zvese uye spammy blog comments. Munguva ichangopfuura, Google yakagadzirisa hutsva hwehutano hwehutano maererano nezvose zvakaderera shure zvakasununguka zvinofanira kubviswa. Kana zvisina kudaro, nzvimbo yewebhu inogona kunge inodhakwa neGoogle, kana kuti kuwana zvimiso zvinotungamirira kuhotera yepamusoro. Ndicho chikonzero, nhasi, unhu hwehukama huripo hunokosheswa kupfuura huwandu hwavo. Zvinoreva kuti iwe unoda kutarisa chiremera uye kukosha kwezvakakonzera kuisa chibatanisi kwauri.
Kana zvasvika paPeRank nokuda kwebvuro rako rewebhu, izvi zvinotsanangurwa nehuwandu hwehukama huri panzvimbo yako.Zvinoreva kuti kana iwe uchibatanidzwa nemapeji ewebhu ane PR yakaderera, yako PageRank haizokura.
Ndicho chikonzero chimwe chezvinhu zvakasununguka kumashure kubva kunzvimbo yakakosha yeWR webhutori inodhura zvakapfuura mazana ezvishoma. Zvishoma zvakashandiswa zvinoshandiswa zvinoshandiswa nevasingabatsiri SEO vanotengesa, vanowana nekunyengedza mabasa ekuvaka masangano, haisi kungoita zvakaipa pawebsite yako SEO, asiwo kuparadza mufananidzo wako wekambani uye mukurumbira.
Zvakakosha kumashure ekubva kune dzimwe nzvimbo dzakasiyana-siyana dzewebhu neHigh PageRank dzichaita kuti bhizinesi rako ribudirire uye kubatsira injini dzekutsvaga kuti zipiwe nzvimbo yako.
Ndivanaani vese backlink yaunoda kuti utaure zvakakwirira muGoogle?
Hapana chikonzero chekumutsa mubvunzo uyu sezvo mhinduro pamusoro payo ichatsvaga yebhizimisi yako uye yezera remakore. Chimwe chinzvimbo chinoda huwandu hwemashure e-backlinks kukwirira kumusoro pakutsvaga peji peji, apo imwe nzvimbo inoda ruzivo rwakasiyana-siyana rwakakosha kusimudzira simba raro nekuvandudza mukurumbira. Zvechokwadi, pane dzakawanda zvimwe zviratidzo zvinotarisa zvinowedzera panzvimbo yewebsite mune zvitsvakurudzo.
Chii chinonzi backlinks chakanaka?
Mhando yakanakisisa ye backlinks ndeyekuti kunze kwekubatanidzwa. Vanouya panzvimbo yako pasina nzvimbo yako yekukumbira uye kuwana apo iwe usingatarisiri. Izvi zvakabatanidzwa kubva pamabloggi akakodzera uye akakurumbira kana mawebhusayithi anotarisisa zvikuru zviri mukati mako uye anosarudza kugovana naro nevadzidzi vavo. Sezvo mutemo, rudzi urwu rwekudzokera shure hunowanikwa kubva kunzvimbo dzakakodzera dzewebhu uye hunounza zvakawanda zvemotokari kune imwe nzvimbo yakabatana.
Zvisinei, zvakaoma kuti uwane hutano hwehupenyu kubva kune dzimwe nzvimbo dzekutendeseka mumisika yako yemisika. Nzvimbo yako yekutora inofanira kuva nehuwandu hwevashandisi uye ine mukurumbira wakakwirira wekuwana mukana wekuwana masangano anouya kubva kune vatungamiri vemabhizimusi Source .